Kambodza : Azo Atao ny Manao Fihetsiketsehana, Saingy Ao Anatin’ny Zaridainan’ny Fahafahana Irery Ihany · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Laora
Voadika ny 26 Mey 2017 8:50 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Français, عربي, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Vaovao ratsy: ao anatin'ilay Zaridainan'ny Fahafahana vaovao ihany no azo anaovana ireo fihetsiketsehana. Ankoatra izay, ilàna fahazoandàlana ny fahafahan'ireo mpanao fihetsiketsehana miditra ao anatiny.
Nofaritan'ireo mpitoraka blaogy sasantsasany ho toy ny « zaridainan'ny fandraofana » na « zaridainan'ny fanaisorana fahalalahana» ilay zaridainan'ny Fahafahana. Maneho hevitra i The Son of the Khmer Empire:
Na dia izany aza anefa dia misy ireo afa-po amin'ny fisian'ity fanomezan-dàlana ho ao amin'ny zaridainan'ny fahafahana ity. Intỳ misy fanehoankevitry ny olona iray tsy nitonona anarana:
… manginy fotsiny ny fibahanan'ireny fihetsiketsehana mikorontana ireny ny fifamoivoizana, ny famoronany fitohanan'ny fiara sns. Tsara ny nanondroan'ireo manampahefana toerana iray tamin'ny alàlan'ny lalàna.
Fampandrosoana 14 Avrily 2022
Fahalalahàna miteny 13 Avrily 2022
Fanoherana 06 Marsa 2022